ဆက်သွယ်မေးမြန်းခန်း | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS) | Page 3
Home ဆက်သွယ်မေးမြန်းခန်း Page 3
(ICC) မှာ သက်သေထွက်ဖို့ တပ်မတော်သား ၂ ဦးကို AA ဘယ်လို ပူးပေါင်း ပို့ဆောင်ခဲ့လဲ ?
❖ နိုင်ငံတကာ ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာ တရားရုံး (ICC) ကို ရိုဟင်ဂျာအရေး သက်သေအဖြစ် ထွက်ဆိုဖို့ တပ်မတော်သား ၂ ဦး ရောက်ရှိအောင် ရခိုင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ AA ဘယ်လို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့လဲဆိုတာနဲ့ ဒါကြောင့် နိုင်ငံတကာဖိအား ဘယ်လောက်အထိ ပိုပြင်းထန်လာနိုင်မလဲဆိုတာ ဒီလူမှုအဖွဲ့အစည်းရဲ့...
(ICC) ရောက် တပ်မတော်သား ၂ ဦးနဲ့ နိုင်ငံတကာ ဖိအား ဘယ်လောက်ပြင်းထန်လာနိုင်လဲ ?
❖ ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းက (ရိုဟင်ဂျာ) သိန်းနဲ့ချီပြီး ဘင်္ဂလားချေဒ်နိုင်ငံဘက် ထွက်ပြေးခဲ့ကြရတဲ့ ၂၀၁၇ ခုနှစ်က နယ်မြေရှင်းလင်းရေး ဖြစ်စဉ်မှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ တပ်မတော်သား ၂ ဦး နိုင်ငံတကာ ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာ တရားရုံး (ICC) ကို ရောက်ရှိနေမှုကနေ နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းရဲ့...
၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲကနေ မြန်မာ့ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် နိုင်ငံရေး ဘယ်လောက် အရွေ့ရှိနိုင်မလဲ ?
❖ တပ်မတော်နဲ့ မြောက်ပိုင်းအဖွဲ့တွေအကြား အပြန်အလှန် ထုတ်ပြန်ထားကြတဲ့ တစ်ဖက်သက်အပြစ်ရပ် ကြေညာချက်တွေက ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်မှုအန္တရာယ် ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ဒေသခံပြည်သူတွေအတွက် အလုပ်ဖြစ်ရဲ့လားဆိုတာ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးနှင့် စစ်ရေးလေ့လာသုံးသပ်သူ ဆရာဦးမောင်မောင်စိုးနဲ့ ဆက်သွယ်မေးမြန်း တင်ဆက်ထားပါတယ်။ ❖ ဒါ့အပြင်...
NLD ပါတီရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကြေညာစာတမ်းမှ မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေး အနီး/အဝေး
❖ တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့ နိုင်ငံရေးဗျူရိုအဖွဲ့ဝင် မစ္စတာယန်ကျားချီရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ခရီးစဉ်၊ မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးမှာ တရုတ်နိုင်ငံ ဆက်လက်ကြားဝင်ကူညီပေးဖို့ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်နှင့် NLD ပါတီရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကြေညာစာတမ်ေများမှ မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေး အနီး/အဝေးအပေါ် မြန်မာ့နိုင်ငံရေးလေ့လာသုံးသပ်သူ ဦးသန်းစိုးနိုင်နဲ့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။
ပြဌာန်းလိုက်တဲ့ တပ်မတော် အက် ဥပဒေကို ပြင်ဆင်တဲ့ ဥပဒေကြောင့် ဘယ်လို သက်ရောက်မှုတွေ ရှိလာနိုင်မလဲ ?
❖ ဩဂုတ်လ (၂၆) ရက်နေ့ ရက်စွဲနဲ့ နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့် လက်မှတ်ရေးထိုး ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ “၁၉၅၉ ခုနှစ် တပ်မတော်အက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်တဲ့ ဥပဒေ” ကြောင့် စစ်ဘက်ရေးရာ တရားစီရင်ရေးတွေအပေါ် ဘယ်လို သက်ရောက်မှုတွေ ရှိလာနိုင်ပါမလဲ။
ကိုဗစ် ကူးစက်မှု မြင့်မားနေတဲ့ ရခိုင်မှာ အပစ်ရပ်ရေးနှင့် (မြန်မာ့ ငြိမ်းချမ်းရေး အလားအလာ)
❖ ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်မှု မြင့်မားနေတဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ နှစ်ဘက် အပစ်ရပ်ဖို့ ဘာကြောင့် ခက်ခဲနေကြတာပါလဲ၊ တပ်မတော်ရဲ့ တစ်ဖက်သက် အပစ်ရပ်သက်တမ်း ထပ်မံတိုးမြှင့်မှုထဲ ရခိုင်ပြည်နယ် ကို မထည်သွင်းတာ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာတွေကို မြန်မာ့နိုင်ငံရေးနှင့် စစ်ရေး လေ့လာ သုံးသပ်သူ ဦးသန်းစိုးနိုင်နဲ့...
ရခိုင်မှာ ကိုဗစ် ၁၉ ကူးစက်မှု မြင့်မားနေချိန် – (ရိုဟင်ဂျာ) တွေရဲ့ ၃ နှစ်ပြည့်ချိန် အခြေအနေ
❖ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ကိုဗစ် ၁၉ ရောဂါကူးစက်မှု မြင့်မားနေချိန်မှာပဲ လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ နှစ်က တပ်မတော်ရဲ့ နယ်မြေ ရှင်းလင်းမှုတွေအတွင်း တဖက်နိုင်ငံကို ထွက်ပြေးခဲ့ကြရတဲ့ သိန်းနဲ့ချိတဲ့ (ရိုဟင်ဂျာ) တွေရဲ့ နေရပ်ပြန်ရေးနဲ့ အခြေအနေတွေက ဘယ်လိုတွေ ရှိနေပါလဲ။
ရခိုင်ပြည်နယ်က ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကူးစက်မှုနှုန်းနဲ့ စိုးရိမ်ဖွယ်ရာ ဒုက္ခသည်စခန်းတွေ အခြေအနေ
❖ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ကူးစက်မှုနှုန်း မြင့်မားနေတဲ့ အခြေအနေမှာ မဖြစ်မနေ လူစုလူဝေးနဲ့ နေထိုင်နေကြရတဲ့ ပဋိပက္ခအမျိုးမျိုးကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရတဲ့ ဒုက္ခသည်စခန်းတွေကို ရောဂါကူးစက်ပြန့်ပွားမှု မရှိအောင် ကာကွယ်ဖို့ ဘာတွေ ဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်နေပါလဲ။ ❖...
∎ ၁၀ နှစ်အတွင်း ဘယ်လို လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေ အများဆုံးလဲ ?
∎ "ဒုက္ခမြေပုံ" လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေ အစီရင်ခံစာနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက် ●——————————————— ❖ ၁၀ နှစ်တာ ကာလအတွင်း မတရားဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်မှု၊ ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြတာကို ပိတ်ပင်မှုအပါအဝင် ကျေးရွာတွေ မီးရှို့ခံရတာ၊...
အတည်ပြုခဲ့တဲ့ ပြည်ထောင်စု သဘောတူစာချုပ်အပေါ် သဘောထားအမြင်
❖ ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေး ညီလာခံ - (၂၁) ရာစု ပင်လုံ (စတုတ္ထ) ညီလာခံက အတည်ပြုခဲ့တဲ့ ပြည်ထောင်စုသဘောတူစာချုပ်ပါ အချက်တွေက အနာဂတ် ဒီမိုကရေစီ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက် ဘယ်လောက်အထောက်အကူ ဖြစ်စေနိုင်မလဲဆိုတာ ဖက်ဒရယ်ဥပဒေအကယ်ဒမီရဲ့ ကျောင်းအုပ်ကြီးဖြစ်သလို Legal Aid Network...